Soomaali oo dil iyo dhaawacyo loogu geystay Canada | Somali National Television - sntv.so
Home AMNIGA Soomaali oo dil iyo dhaawacyo loogu geystay Canada
Soomaali oo dil iyo dhaawacyo loogu geystay Canada
Wararka aan ka heleyno dalka Canada, waxay sheegayaan in rag hubeysan ay gudaha magaalada Toronto ee dalka Canada dil iyo dhaawac ugu geysteen dad Soomaaliyeed oo qaxootimo ku deganaa dalkaas.
Ragga hubeysan oo watay gaari ayaa la sheegay inay rasaas ku fureen goob ay ku sugnaayeen dhalinyaro Soomaali ah, waxaana halkaas lagu dhaawacay seddax wiil oo mid goor dambe uu dhaawacaas u geeriyooday.
Sahal Maxamed Sahal, ayaa magaciisa naloogu sheegay wiilka Soomaaliyeed ee dhaawaca ka soo gaaray weerarkaas ugu geeriyooday dalka Canada, halka labada qof oo kale ay dumar yihiin, kuwaas oo dhaawacyadooda lagu dabiibayo Isbitaal ku yaalla magaalada uu weerarkaan ka dhacay ee Toronto.
Aabaha dhalay wiilka la dilay ee Sahal Maxamed ayaa Warbaahinta u sheegay in uusan ogeyn cadaw gaar ah oo uu lahaa wiilkiisa, qadartana uu aaminsan yahay, isla markaana ay meydka wiilkiisii Sahal ku soo aaseen qabuuro ku yaalla magaalada Toronto, sidoo kale Aabe Maxamed, waxa uu sheegay in laamaha amniga magaalada ay wadaan baaritaano la xiriira dilka wiilkiisa, balse illaa hadda aysan jirin wax xiriir ah oo ay la soo sameeyeen mas’uuliyiinta dowladda.
Previous articleMadaxweynaha oo ka tacsiyeeyay geerida Eng. Maxamed Cumar Saalixi
Next articleJananka ugu sareeya ciidamada Mareykanka oo Taliban ku tilmaamay “koox arxan daran”